taxane shaybaara Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaal - Taxanaha shaybaarka Shiinaha Factory
BA200 Falanqeeyaha algae-buluug-cagaaran ee la qaadan karo
Falanqeeyaha algae-buluug-cagaaran ee la qaadi karo wuxuu ka kooban yahay marti-qaade la qaadi karo iyo dareeraha algae buluug-cagaaran oo la qaadi karo. Iyaga oo ka faa'iideysanaya astaamaha ay 'cyanobacteria' leeyihiin heerka ugu sarreeya ee wax soo nuugista iyo soo saarista hawada sare, waxay ku sii daayaan iftiinka halbeegga ah ee dhererka dhererka gaarka ah ee biyaha. Cyanobacteria ee ku jirta biyaha waxay soo dhuuqayaan tamarta iftiinka hal-abuurka ah waxayna sii daayaan iftiinka hal-dheer ee dherer kale. Iftiinka iftiinka ee ka baxa algae-buluug-cagaaran ayaa u dhigma waxa ku jira cyanobacteria ee biyaha ku jira.
CH200 Falanqeeyaha chlorophyll La qaadan karo
Qalabka loo yaqaan 'chlorophyll analyzer' wuxuu ka kooban yahay marti-qaade la qaadi karo iyo dareeraha chlorophyll la qaadi karo.Chlorophyll sensor wuxuu adeegsanayaa meelaha ugu hooseeya ee nuugista maaddada caleenta ee muuqaalka muuqaalka iyo soosaarida ugu sarreysa ee guryaha. tamarta iftiinka iyo sii deynta dhererka dhererka dhererka kale ee iftiinka monochromatic, chlorophyll, xaddiga sii deynta waxay u dhigantaa waxa ku jira chlorophyll ee biyaha.
CON200 tijaabada tabinta gacanta ee gacanta waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu baaro halbeegyo fara badan, iyadoo la siinayo xalka hal-joogsi ee ku xirnaanta, TDS, cusbada iyo heerkulka. Alaabooyinka taxane ah ee 'CON200' oo leh fikrad naqshad sax ah oo wax ku ool ah; hawlgal fudud, shaqooyin awood badan, cabbiraadaha cabbiraadda oo dhammaystiran, cabbiraad ballaadhan;
DH200 alaabooyin taxane ah oo leh fikrad naqshad sax ah oo wax ku ool ah; DH200 oo la qaadan karo oo mitirka Haydarojiinta ah: Si loo cabbiro biyaha Hydrogen Rich, Kala-miirnaanta Haydarojiin ee matoorka biyaha Haydarojiin. Sidoo kale waxay awood kuu siineysaa inaad ku cabirto ORP biyo koronto ku shaqeeya.
DO200 Mashiinka Oxygen-ka La Kala Daadiyey
Xalka sare ee tijaabiyey oksijiinta ayaa leh faa iidooyin badan dhinacyada kala duwan sida biyaha wasakhda, biyo dhaqida iyo halsano, iwm.
Hawlgal fudud, shaqooyin awood badan, cabbiraadaha cabbiraadda oo dhammaystiran, cabbiraad ballaadhan;
hal fure oo lagu xisaabiyo laguna aqoonsado otomaatig si loo dhamaystiro nidaamka sixitaanka; interface bandhig cad oo la aqrin karo, waxqabadka faragelinta kahortaga, cabirka saxda ah, hawlgalka fudud, oo lagu daray iftiinka iftiinka iftiinka sare;
DO200 waa aaladdaada tijaabada xirfadeed iyo lammaanaha lagu kalsoonaan karo ee shaybaarada, aqoon isweydaarsiyo iyo shaqooyinka cabbiraadda maalinlaha ah ee dugsiyada.
PH200 Mashiinka la qaadan karo ee PH / ORP / lon / Temp Meter
Waxyaabaha taxanaha ah ee 'PH200' oo leh fikrad naqshad sax ah oo wax ku ool ah;
Afar nooc oo leh 11 dhibcood oo dareere caadi ah, hal fure oo lagu miisaamo iyo aqoonsi otomaatig ah si loo dhammaystiro nidaamka sixitaanka;
Muuqaal muuqaal cad oo la aqrin karo, waxqabadka faragelinta kahortagga, cabirka saxda ah, hawlgalka fudud, oo lagu daray iftiinka iftiinka iftiinka sare;
PH200 waa aaladdaada tijaabada xirfadeed iyo lammaane lagu kalsoonaan karo ee shaybaarada, aqoon isweydaarsiyo iyo shaqooyinka cabbiraadda maalinlaha ee dugsiyada.
TSS200 Falanqeeyeyaasha adag ee la hakiyay la qaadan karo
Cunnooyinka adag ee la hakiyay waxaa loola jeedaa walxo adag oo biyaha lagu xayiray, oo ay ku jiraan mid aan dabiici ahayn, walxo dabiici ah iyo carro dhoobo ah, dhoobo, sheybaarayaal, iwm Kuwa aan ku milmin biyaha. Mawduuca la hakiyay ee ku jira biyaha ayaa ka mid ah tusmooyinka lagu cabirayo heerka wasakhda biyaha.
TUR200 Falanqeeyaha Dhibaatooyinka La Qaadan Karo
Turbidity waxaa loola jeedaa heerka xannibaadda ay sababtay xalka gudbinta nalka. Waxaa ka mid ah ku kala firdhinta iftiinka sheyga la hakiyay iyo nuugista nuurka molikuyuullada xallinta. Dhibaatada biyaha kaliya kuma xirna waxa ku jira shayga la joojiyay ee biyaha ku jira, laakiin sidoo kale waxay la xiriiraan cabirkooda, qaabkooda iyo iskucelceliskooda isugeynta
Tijaabiyaha dhibta la qaadan karo waxaa si weyn loogu isticmaali karaa waaxaha ilaalinta deegaanka, biyaha tuubada, bulaacadaha, biyo galinta degmada, biyaha warshadaha, kuliyadaha dowlada iyo jaamacadaha, warshadaha dawooyinka, caafimaadka iyo xakameynta cudurada iyo waaxaha kale ee go'aaminta jahwareerka, kaliya maahan goobta iyo baaritaanka degdega ah ee tayada biyaha degdega ah ee goobta, laakiin sidoo kale baaritaanka tayada biyaha shaybaarka.
Dareeraha Dareemida Isukeenista Daawaha Titanium, Chlorophyll Sensor, Feeraha Dareeraha Fududeeyaha, Sensor-ka Electromagnetic, Waxqabadka TDS Sensor, Quadrupole Shaxanka Samaynta Iskuduwaha Sawirka,